Fitateram-bahoaka : tsy manan-tsafidy ny mpandeha amin’ireo taxi-be (NewsMada) | AEMW
Fitateram-bahoaka : tsy manan-tsafidy ny mpandeha amin’ireo taxi-be (NewsMada)
Miantoka ny fitaterana be indrindra eto an-dRenivohitra sy ny manodidina ny Taxi-be. 4.800 eo ho eo ny isan’izy ireo (taona 2014), ary azo antoka fa mitombo io isa io amin’izao taona 2016 izao. Na ao amin’ny kaominina na ao amin’ny ATT, tsy manana antontanisa mazava. Mazava loatra, misy amin’ireo fiara ireo miasa tsy ara-dalàna, satria ny tompony olona manam-pahefana…Ao koa ireo mandeha ho azy fotsiny amin’izao, manokana “tetibola” ho an’ny polisy. Na ho an’ireo manana taratasy ara-dalàna aza, mivonona hatrany amin’izay omena ny mpisava taratasy izay.
Tsy misy fenitra apetraka
Miantoka ny fitateram-bahoaka hatrany amin’ny 95 % ny taxi-be, 5 % ambiny ihany ho an’ireo taxi tsotra, izay vao nandraisan’ny kaominina fepetra noho ny fahamaroan’ireo fiara miasa tsy ara-dalàna ihany koa. Tsy manan-tsafidy anefa ny vahoaka. Amina zotra isan-karazany, trandrahin’ireo kaoperativa 65 miasa eto Antananarivo sy ny manodidina (Itaosy, Ivato, Sabotsy Namehana …) : misy fiara efa niasa 20 taona, sasany 10 taona ao ireo fiara vao haingana. Izany hoe, tsy misy fenitra apetraky ny ATT na kaominina momba ny fiara manao izany asa izany. Amin’ireo taxi-be ireo ihany, ao ny kaoperativa mampiasa mpamily matihanina sy mpanampy azy manaja lalàna sy ny mpandeha ; ao koa anefa, ireo fiara ahitana mpamily vao mianatra mitondra.
Tsy manaja bokin’andraikitra
Tsy manan-tsafidy ihany koa ny mpandeha noho ny fisian’ireo fiara tsy manaja bokin’andraikitra. Mampitaraina ny mpandeha hatry ny ela, ohatra, ireo manao tapa-dalana, indrindra ireo mankany any amin’ny kaominina manodidina ; ao ihany koa ireo tsy manaja ora na andro fiasana (mody aloha, tsy miasa andro alahady na fety), manao “vody hazo”. Ny kaoperativa misy ilay fiara mihitsy no mitazam-potsiny, mamela ny tompon’ny fiara hanao izany.
Ny olana kosa anefa ho an’ireo mpitatitra ireo ny faharatsian’ny lalana, miteraka fahavoazana goavana ho azy ireo. Mihena ny “tours” vitan’izy ireo. Antony iray miteraka fitohanan’ny fifamoivoizana eto an-dRenivohitra, ankoatra ny faharatsian’ny lalana, noho ny fahamaroan’izy ireo ihany. Ny mpandeha ihany no tena mizaka ny fahavoazana maro : lany fotoana sady tsy mahazo tolotra sahaza ho azy.
← Maroantsetra-Mananara Avaratra : mirongatra ny fambolena lavanila anaty ala arovana (NewsMada)
Is’art Galerie : ampahafantarina ny « Avant le présent » (NewsMada) →